I-IBM ifuna ii-quantum supercomputers zayo ukuba ziqhube ngaphezu kwe-4000 qubits | Ukusuka kwiLinux
I-IBM ifuna ukuba ii-quantum supercomputers zayo ziqhube ngaphezulu kwe-4000 qubits
Ubumnyama | 12/05/2022 23:15 | Izaziso
I-IBM ibhengeze ukuba iceba ukwandisa amabhongo ayo e-quantum kwaye yahlaziya imaphu yendlela ngeenjongo ezinqwenelekayo ngakumbi, "sebenzisa inkqubo ye-4000-qubit ngo-2025". Ukwakha isixhobo esibamba ngokwenene ukuziphatha kweeathom kwaye sinokusebenzisa ezo ziphatha ukuze sicombulule ezinye zezona ngxaki zinzima kwixesha lethu kunokubonakala kungenakwenzeka ukuba ukucinga kwakho kulinganiselwe kwihlabathi eliqhelekileyo lekhompyutha.
Kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokuthengiswa kweyunithi yezempilo yaseWatson, i-IBM yabhengeza ukuba imodeli entsha ye-Z-series mainframes iza kufika "ekupheleni kwesiqingatha sokuqala" sika-2022, iphawula ukuba iqela leqela liza kuba ngumthombo wengeniso eyandisiweyo. Inkampani yoshishino lweziseko ezingundoqo.
Ezi ndaba zazingumxholo wengxoxo kwishishini, njengoko i-Big Blue ibonakala "iyahamba" kwezo "iinkqubo ezinkulu zakudala" ukugxila kumashishini anenzuzo ngakumbi njengelifu elixubileyo kunye nobukrelekrele bokufakelwa (AI). Nangona kunjalo, inkampani iqinisekise abatyali-mali ukuba "abanye" abathengi basanomdla.
Ngokutsho kwe-IBM, i-mainframe market isekho kwaye inika inkampani ngokukhuthazwa okwamkelekileyo kwingeniso. Ukwenza oku, ilungiselela umjikelo omtsha weekhompyuter ze-mainframe ekupheleni kwesiqingatha sokuqala sonyaka.
Isibhengezo senziwe ngoMvulo ngexesha lenkomfa ye-Big Blue yekota yesine ye-2021. Ngexesha lomnxeba, uCFO James Kavanaugh ucebise ukuba ukukhutshwa okutsha kuya kuba nefuthe elihle kwingeniso ye-IBM, eyayiyi-16,700 yeebhiliyoni zeedola kwikota kunye ne-57,000 yeebhiliyoni zeedola ukuya kwi-35,000 yezigidigidi ngonyaka.
Kwiminyaka engamashumi amane emva kokuba iqalile ukwenza i-quantum computing, i-IBM ikulungele ukukhupha itekhnoloji kwilebhu kwaye ifake izicelo ezisebenzayo ezifana ne-supercomputer! Inkampani sele idlulile inani leembali zophuhliso ukususela ekukhululeni imephu yendlela ye-quantum yangaphambili ngo-2020, kuquka iprosesa ye-Eagle ye-127-qubit esebenzisa i-quantum circuitry kunye ne-Qiskit runtime API.
Ukwenza oku, I-IBM iceba ukufumana kuqala iiseti zeprosesa ezininzi ukuze zinxibelelane ngokufana nangokulandelelana. Oku kufuneka kukhokelele kuphuhliso lwezikim zokunciphisa iimpazamo ezingcono kunye nolungelelwaniso olungcono phakathi kwabaqhubekisi, izinto ezimbini eziyimfuneko kwiikhompyuter zequantum zangomso.
Ukongeza koku, I-IBM ukuyila kunye nokuphumeza i-chip-level couplers, eya "kukudibanisa ngokuqinileyo iitshiphusi ezininzi kunye ukwenza ngokufanelekileyo iprosesa enye enkulu," ngokutsho kwenkampani, kwaye emva koko yakhe amakhonkco onxibelelwano lwequantum ukudibanisa ezi ziprosesa zikhulu, nakumaqela amakhulu: ngokubalulekileyo ukuhlanganisa amaqela amakhulu kunye. de benze iqonga elisebenzayo, lemodyuli ye-4000-qubit computing platform.
Njenge, I-IBM ikhuphe iseti yenkqubo esele ilungele ukusetyenziswa ekuqaleni kwalo nyaka, "iinkqubo ezakhelwe ngaphambili ezivumela abaphuhlisi ukuba bafikelele ngokulula kwiziphumo zokubala kwe-quantum ngaphandle kokufuna ukuqonda okuyinkimbinkimbi kwe-hardware," ngokutsho koluntu. I-IBM ijonge ukwandisa le suti yeenkqubo ngo-2023, ivumela abaphuhlisi ukuba baziqhube kwiiprosesa ze-quantum ezihambelanayo.
Olu hambo luza kuthatha ingxaki ethile, lwahlule lube ziinkqubo ezincinci zequantum kunye neklasiki, ziqhube ezi nkqubo ngokunxuseneyo okanye ngokulandelelana, nokuba yeyiphi eyona isebenzayo, kwaye emva koko isebenzise umaleko weokhestra "ukubopha" zonke ezi nkqubo zahlukeneyo zokuqhutywa kunye. iziphumo ezihambelanayo ukuba iikhomputha eziqhelekileyo ziya kuba nakho ukuqonda. I-IBM ibiza isiseko sayo sendibano yobunini i-Quantum Serverless, kwaye ngokwemephu yendlela entsha, iya kuphumeza inqaku kwi-software yayo ye-quantum engundoqo ngo-2023.
Ngo-2025, sikholelwa ukuba abaphuhlisi bemodeli baya kuba nakho ukuphonononga usetyenziso lwe-quantum ekufundeni koomatshini, ukulungelelaniswa, imali, isayensi yendalo, kunye nokunye. "Kwiminyaka emininzi, ii-supercomputers ze-CPU-centric ziye zaba yinkqubo yokusebenza kweshishini, kunye ne-IBM engumphuhlisi ophambili wezi nkqubo," waqhubeka.
Kwiminyaka yakutshanje, siye sabona ukunyuka kwee-AI-centric supercomputers, apho ii-CPU kunye nee-GPU zisebenza kunye kwiinkqubo ezinkulu ukujongana nomthwalo onzima we-AI.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Izaziso » I-IBM ifuna ukuba ii-quantum supercomputers zayo ziqhube ngaphezulu kwe-4000 qubits
Baye bafumanisa ukuba sesichengeni kwi-RubyGems.org evumela ukubuyisela iiphakheji
INvidia ikhuphe ngokusemthethweni ikhowudi yeemodyuli zayo ze-GPU zeLinux